कीमती र सेतो कीमती गेम्सस्टोनहरू के हुन्? महँगो वा किफायती?
बहुमूल्य र अर्द्ध बहुमूल्य गीस्टस्टोनहरू
जीमोलॉजिकल साइंसको अनुसार, रत्नका लागि दुई वर्गीकरणहरू छन्: कीमती पत्थरों र अर्ध कीमती पत्थरों।
त्यहाँ केवल4कीमती पत्थरहरू छन्
4 कीमती पत्थरों हीरे, रूबी, नीलमणि, र पन्ना हुन्।
70 परिवारहरु र 500 किस्महरु को बारे मा रत्न को रूप मा वर्गीकृत गरिन्छ
Diffrence betwin रत्न र अन्य पत्थरों तथ्य यो छ कि उनि गहने बनाउन प्रयोग गर्दा अन्य पत्थरहरू छैनन्।
धेरै मानिसहरु विश्वासको विपरीत, पत्थरहरू किन बहुमूल्य रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ मात्र एक कारण हो। वास्तवमा, 500 वर्ष पहिले, यो संसारको शक्तिशाली यी चार ढुङ्गामा मात्र रुचि थियो। समयमा, अर्को ढुङ्गाको कुनै मूल्य थिएन। यसैले हामी विचार गर्न सक्छौं कि यो फैशनेबल ढुङ्गाहरू थिए, त्यसबेला तिनीहरू रहिरहेका छन्, आजसम्म, ती शक्तिशालीहरूले शक्तिशाली द्वारा इनाम दिए।
यसले धन र शक्तिको प्रतीक प्रतिनिधित्व गर्यो। र यो त्यहि कारणहरूका लागि हो कि यो अझै पनि बनी रहन्छ, यस समयमा, सबैभन्दा महंगी ढुङ्गा।
त्यसैले त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक व्याख्या छैन। यो केवल बजार कानून वा आपूर्ति र मागको व्यवस्थाको कारण हो।
तपाईं "बहुमूल्य" ओपलहरू, टन्जानाइटहरू, अलेक्जान्ड्राइटहरू र अन्य धेरै ढु stones्गाहरूको बारेमा सुन्नुहुनेछ। यो पूर्ण रूपमा गलत छ। तर यो एउटा बेच्ने बिन्दु हो जुन मणि व्यापारीहरूले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न, र ढु stone्गामा मूल्य थप्नको लागि, उत्तम बेच्ने मूल्य प्राप्त गर्ने आशामा।
प्रायः मणि व्यापारीहरू रत्नविद्हरू होइनन् र प्राय: सोच्दछन् कि उनीहरूलाई के कुरा गरिरहेको हो भनेर थाहा छ, जब उनीहरूलाई उनीहरूको खरीद मूल्य र बिक्री मूल्य थाहा हुन्छ जुन उनीहरूले प्राप्त गर्ने आशा गर्छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले प्राकृतिक ढु stone्गा र कृत्रिम ढु stone्गा बीचको भिन्नता जान्दैनन्। यो अचम्मको कुरा हो, होइन र?
यसैले त्यहाँ रत्न विज्ञान प्रयोगशालाहरू छन् जसले ढु stones्गा प्रमाणित गर्छन्। यसले विक्रेताको लागत बढाउँदछ, तर बिक्री सुविधा गर्दछ।
बहुमूल्य र अर्द्ध कीमती पत्थर मूल्य
अर्को गलत धारणा भनेको प्राकृतिक बहुमूल्य गीस्टस्टोनहरू धेरै महान् हुन्। तथ्याङ्कहरूमा, यो सँधै साँचो छैन। वास्तवमा, एक हीरा, एक रूबी, नीलमणि वा पन्ना आर्थिक रूपमा धेरै सस्ती हुन सक्छ। यसले उनीहरूको गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। जबकि केहि उच्च गुणवत्ता अर्द्ध कीमती पत्थरों को यिनी कम गुणवत्ता की रत्न को तुलना मा ज्यादा खर्च हुन सक्छ।
संक्षेपमा, बहुमूल्य र अर्द्ध बहुमूल्य ढुङ्गाहरू धेरै महसुस गर्न सक्दछन् वा धेरै किफायती।
यदि तपाईं यस शीर्षकपमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, सिद्धान्तबाट जाने अभ्यास गर्न चाहन्छौं, हामी प्रस्ताव गर्छौँ जीमोलोजी पाठ्यक्रमहरू.